Abantu abaninzi bayakhalaza ngokungahambi kwekhalsiyam emzimbeni. Esinye sezizathu zalo zizinto eziphantsi zeli qela kwisondlo ngokwayo. Kodwa ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba umntu ubonakala edla kwimveliso eninzi eneemveliso zelisi-milk and milk-sourity, i-cheeses, intlanzi kunye nokusela kwamanzi, kodwa i-calcium isweleka.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuhlanganiswa kwe-calcium - inkqubo inzima kwaye ixhomekeka kwizinto ezininzi. Ngoko ke, yintoni oyenzayo-kuquka okufuneka uyidle, ukuze i-calcium ityekele?
Ukunyuselwa kwe-calcium kwenzeka emathunjini amancinci, kwaye ukuphucula le nkqubo, kuyimfuneko ukuba iiseli ze-intestinal epithelium zisebenze ngokuqhelekileyo. Kwi-assimilation ye-calcium, i-hormone ethile - i-perathyroid, i-hormone yokukhula, i-calcitonin eveliswa yintsholongwane ye-thyroid, i-hormone ye-sex-estrogen kubasetyhini, i-testosterone yamadoda inxaxheba. Yaye kunye nomxholo wale hormone kufuneka uwanele kwaye ulinganise.
Ukuze usebenzise ngokufanelekileyo i-calcium kwiimfucu zamathambo, kukho izinto ezifunekayo, kunye nenani elaneleyo lamavithamini, ngakumbi i-D ne-K. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-vitamin D iyadingeka kwifomu yayo esebenzayo-iya kule fomu kwisibindi kunye neentso, ngoko, ukukhubazeka kwezi ziko, kunye nokuphazamiseka ekusebenzeni kwepascreas kunye ne-thyroid gland, kwakunye neengcinezelo kunye ne-hypodynamia kwilizwe ngokungathanga ngqo ukuphazamisa ukuphumelela kwe-calcium.
I-acidity yejusi yesisu isithintela le nkqubo: kwi-acidity ephantsi ephawulwe kubantu abakhulileyo okanye ngezifo zesisu esisisu, ukuxiliswa kwe-calcium kuhlahloka. Le nto ibangela ukuba kubekho amayeza amakhulu anciphisa u-acidity of juice esiswini esiphucula intlungu, esetyenziselwa unyango lwezilonda zesisu kunye ne-duodenal ulcers. Kukhona umphumo ophazamisayo owaziwayo ekutyeni kwe-calcium kumathumbu amayeza kunye namanye amaqela: i-laxatives, i-diuretics, izidakamizwa ze-anticonbulsant, kunye nama-hormone e-adrenal cortex, i-thyroidin ne-hormone ye-steroid.
Ukuthintela ukutshatyalaliswa kwe-calcium kwakhona kunomxholo ophantsi weprotini ekudleni-ngoko i-vegetarianism yandisa ingozi ye-calcium. Isiphumo esifanayo sinikeza kwaye sifakwe kwisidlo soshukela elula kunye ne-carbohydrate ngokubanzi-oku kubangela ukunciphisa kwi-pH yegazi kwaye kukhuthaza "ukuhlamba" kwe-calcium emathanjeni. Ukukhawuleza ukurhoxiswa kwekhalsiyumu ukusuka kumzimba wekhofi kunye neparsley; Ukutya okunomdaka ophezulu kunqanda ukuxhatshazwa kwe-calcium, ukwenzela ukuba xa kukho ukungabikho kwe-calcium emzimbeni, akukho mntu okanye omnye ufanele aqhutywe kakubi.
Kwaye ngoku malunga nabancedisi bemveliso. Abarekhoda kwiphepha le-calcium babecinga i-sesame kunye ne-poppy-kukho amaxesha angaphezulu kwama-10-12 ngaphezulu kwale minerali kunobisi beenkomo, umthombo wemveli we-calcium. Ukusuka kwimifuno, i-broccoli kunye nezinye iiklabishi, isipinashi, i-turnip (kunye namaqabunga ayo), i-asparagus, imifino ye-parsley yizona nkokeli kwi-calcium. Iqukethe ubhontshisi be-calcium kunye neengcingo, amakhiwane, iindidi ezahlukahlukeneyo, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-garlic, i-gooseberries, i-currants, i-cherries kunye ne-strawberries-yilokho okufuneka uyidle ukuze uthole i-calcium. Kule meko, khumbula ukuba enye i-sorrel kunye nesipinashi iyancipha ukunciphisa i-calcium ngenxa yokwakheka kweetyu.
Ngokuqhelekileyo, ekudleni, i-calcium ihlala ikhona ngokwemiqathango yamacandelo anokunciphisa ubunqabileyo emanzini. Ngale nto, i-bile acids eveliswe esibindi somntu. Yingakho impilo yebindi ibalulekile ekugqithiseni i-calcium.
Ukuqinisekisa ukusebenza ngokuqhelekileyo kwentliziyo kwi-plasma yegazi, enye i-calcium ion kufuneka ibe ne-potassium-ioni ezimbini, i-phosphorus kunye nokutya ukungena kuma-1.5 ngamaxesha ngaphezulu, umlinganiselo we-calcium kunye ne-magnesium-ibe kwizinga le-1: 0.5. Olunye ulwalamano - ngaphezu kwazo zonke, kunye nokugqithiseleka, nokungabikho kwe-magnesium kunye ne-phosphorus-ukutsalwa kwe-calcium inhibits. Ngoko kukhuthazwa ukusebenzisa ukutya okuhlukeneyo equkethe i-calcium (kunye namalungiselelo e-calcium), kunye ne-cocoa, kunye ne-soy, i-bran, imvubelo ye-brewer. Ngokomzekelo, i-phytic acid equlethwe kwi-bran, ihambelana ne-calcium, ifomathi enokuthi ixutywe emzimbeni ngaphandle kokungena emathunjini .
Kodwa yintoni kanye eya kunceda:
Ukukhanya kwelanga, ngaphantsi kwempembelelo yesikhumba eyenza uvelise i-vitamin D, echaphazelekayo kwi-calcium.
IiVithamini - ngokuyinhloko i-A, C, E ne-B vithamini. I-Vitamin B6 inxulumene ne-magnesium inqanda ukwakheka kwamatye eentso kunye ne-cholelithiasis, kwimeko yezinga eliphezulu le-calcium egazini, okwandisa umngcipheko wamatye. I-silicon ibophelela ekuhlanganiseni amathambo, kwaye i-selenium "iyalela" i-calcium kwiiseli zamathambo esithambo. I-silicon efanayo kunye nobhedu, i-manganese, i-zinc kunye nevithamini C no-E zikhuthaza i-calcium ekulondolozeni ulusu lolutsha kunye nokwakhiwa kweenwele, izipikili, i-cartilaginous kunye namathambo esifuba
Ukwenziwa komgangatho we-acidity of juice esiswini, ngakumbi ekuguga. Yidla ukutya okuqukethe iicids.
I-Iron yenza ngcono ukuchithwa kwe-calcium.
Imithombo emininzi engavumelaniyo ye-vitamin D - ukunciphisa izandla ukuhlamba ubuncinci kwaye isebenzise ubuncinane ubuncinane besepha - kunjalo, ngaphandle kokuhamba ngaphezu kococeko kunye nokuqonda. I-Vitamin D ifumaneka kwimfihlo yecala, kwaye ukuhlanganiswa kwale vivamini kukhuthazwa kwinkqubo yokubilisa umzimba, okubonelela ulusu ngolutsha kunye nempilo.
Ngokubonelela umzimba nge-vitamin D, qwalasela umsebenzi wezintso - kuzo, i-vitamin D ngokwayo iguqulwa ibe yinto ehambisa i-calcium emathunjini amancinci.
Ukuxhasa impilo ye-membrane yamathumbu emathumbu amancinci kuya kunceda ukutya kunye nomxholo okwaneleyo we-carotene. I-mucosa evuselelweyo ayikwazi ukwenza i-calcium ngokufanelekileyo!
Izinto ezibandakanyekayo kwinkqubo yokuhambelana ne-calcium ziqulethwe kwiidroti kunye neezambatho, i-blueberries, i-gooseberries, i-dogrose, i-currants emnyama. Ngaphandle kwabo, hlaziya rhoqo umzimba kunye namavithamini, usebenzisa i-herbal teas kunye namayeza asemayeza. I-Omega-3 fatty acids nayo inempembelelo emihle - iqulethwe, umzekelo, kwioli ye-linseed.
Nelisa umzimba kunye ne-oksijeni kunye nomlinganiselo olinganiselweyo we-carbohydrate engcolileyo, kuba ukudluliselwa kwe-calcium ngodonga lwamathumbu emzimbeni kudibene neendleko ezinkulu zamandla.
Yintoni eyingozi kwiziphuzo ze-carbonate?
Iimpawu kunye nesondlo esifanele kwi psoriasis
Ilayiti ye-Rice - enempilo
Iipropati ezifanelekileyo zeTanatlan
Umthombo ongcono kakhulu weprotheni yemifuno
Ukuhluthwa kwePhilippine: imiqondiso kunye neendidi
Ekhaya njengevenkile yokutyela: sifunda ukuhambisa izitya zenyama ngokuhle
Amadoda abukela abafazi
Izityalo zasePotted Aphelander
Ungamqinisekisa njani umntu ukuba uyiphutha?
Yintoni echaphazela umsebenzi wengqondo
I-Apple kunye ne-pumpkin jam
Izifo zendlela yokuphefumula kubantu
Indlela yokugubungela itafile ngosuku lokuqala lokuzalwa komntwana?
Iingcebiso ezili-10 zokuphelisa ukuthozama okukhulu
Indlela yokudweba shellac?